5 Sabab oo haweeney kasta oo uur leh ugu qasbantahay inay isticmaasho Qaraha - Aayaha
Home/CAAFIMAADKA/5 Sabab oo haweeney kasta oo uur leh ugu qasbantahay inay isticmaasho Qaraha
Uurka waa waayo aragnimo ay wajaheyso haweeeney walba, balse waxaa jira culeysyo badan oo la yimaado uurka kuwaas oo qaarkood ay la xiriiraan dhinaca caafimaadka.
Hadaba cilmi baaris la sameeyay ayaa lagu ogaaday qaraha inuu caawin weyn u yahay hooyooyinka uurka leh isla markaana kahortago ama hoos u dhigo xanuuno farabadan oo hooyada soo wajaha xilliga uurka.
Waa kuwaan sababaha haweeney walba oo uur leh ku qasbaya in qaraha ay ka dhigtaan cuntada koowaad ama ugu jecelyihiin.
1. Qaraha wuxuu kaa caawinayaa kahortagga bararka ku yimaada Cagaha & Gacmaha
Caga bararka iyo gacma bararka waa xaalad iska caadi ah xilliyada uurka, Waxayna xaaladdaas soo wajahdaa 75% haweenka uurka leh kuwaas oo lakulma bararka cagaha iyo gacmaha inta lagu guda jiro mudada uurka.
Baaris la sameeyay ayaa lagu ogaaday in qaraha uu kahortaga isla markaana uu hoos u dhimo xiranka ku yimaada xididada iyo murqaha sidaa darteed wuxuu kaa caawinayaa kahortagga caga bararka.
2. Qaraha wuxuu kaa caawinayaa kahortagga mad madoowga ku yimaada jirka & Wajiga
Inkastoo aanan si dhab ah loo garaneyn waxa sababa madoowga daamanka ama haarta fuusha waxaa loo maleynayaa inay keento kororka heerka hormoonada xilliga uurka.
Haarta madoow ee korta jirta waa xaalad kale oo caafimaad oo inta badan haweenka uurka leh ay ka cawdaan
Sidaa darteed qaraha wuxuu leeyahay dhammaan waxyaabaha wanaagsan ee dhaq dhaqaaqa caloosha u ilaaliya si siman wuxuuna fududeeyaa dheef shiidka taasoo saameyn ku yeelata maqaarka si wanaagsan.
Waxaa sidoo kale muhiim ah inaad ogaatid in jirkaaga oo si joogta ah aad u nadiifisid ay hoos u dhigto haaraha madoow ee jirka kora.
3. Wuxuu sare u qaadaa heerka tamartaada
Qaraha ayaa la ogaaday inay ku jiraan macdan farabadan oo kala potassium, magnesium, iyo fitamiinada A, B1, iyo B6, kuwanina waa nafaqooyin awood kuu yeeleysa oo xoojineysa heerka tamarta jirkaaga.
Waxaa intaas sii dheer in nafaqooyinka aad soo sheegnay inay yihiin kuwo faa’ido uleh isbedellada aragga ee canugga, difaaca iyo habka neerfaha.
4. Qaraha oo kahortaga xanuuno dhowr ah xilliga uurka
Xaalada ugu adag ee uurka waa nooc xanuuneed haweenta kudhaca xiliga ey uurka leedahay waxaana haweenta isugu darsama dhiig kar iyo calaamado muujinaya dhaawac gaara xubno kamid ah kuwa jirka la’aantii aanu shaqeyn karin –sida beerka iyo kaliyaha
Xanuunadaan ayaa waxa ay haweenka ku bilaawdaan marka uu uurka jiro 20 usbuuc kuwaas oo cadaadiska dhiigooda uu ahaan jiray mid acaadi ah wuxuuna saameyn ku yaalan karaa hooyada iyo canugga caloosha ku jira.
Si,kastaba cilmi baaris la sameeyay ayaa lagu ogaaday in maado lagu magacaabo lycopene oo qaraha ku jirta ay kaa caawineyso hoos u dhigidda qatarta xanuunada inta lagu guda jiro xilliga uurka.
5. Qaraha oo koriya lafaha canuga uurka ku jira
Qaraha ayaa waxaa ka buuxa maadooyinka Calciumiyo Potassium, iyo macdan kuwaas oo si toos ah ugu tagaya lafaha saxda ee canugga uurka ku jira.
Caafimaadka Qaraha uurka
Wax ka ogoow Faa'idooyinka caafimaad ee ay leedahay toonta
3 guaranteed actions that annoy your husband